साउँदीको जेलमा छु रोकायाको पहिलो गीत सार्वजनिक ! (भिडियो सहित)| Nepal Pati
साउँदीको जेलमा छु रोकायाको पहिलो गीत सार्वजनिक ! (भिडियो सहित)
बाजुरा । अकला देवी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतिमा प्रदेशी भुमीमा रहेर पनि नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा योग्दान पुयाउने दिनेश रोकायाको एल्बम “ साउँदीको जेलमा छु” युटुव मार्फत बजारमा सार्वजनिक भएको छ ।
गायक दिनेश रोकाया गायिका पुर्णकला विसीको आवाज गीतमा रहेको छ । विदेशमा रहेर घरको श्रीमतीलाई आफ्नु पिडा पोख्दै माया प्रेममा आईपर्ने चित्कारा गीतमा समावेश गरिएको छ । घरमा आमा बुवा छोरा छोरी र श्रीमती छोडेर विदेशीएका दाजुभाईको माया सपनामा भौतारिएर विछोडको अवस्थामा आइपर्नेे जिवन कथा गीतमा रहेको छ । क्रम र भाग्य लेख्ने भावीलाई दोष गायिकाले दिएकी छन् ।
गायक रोकायाले स्वादेशमा नगरेका काम विदेशमा गरेको छु भनेर गीत मार्फत दुख पोखेका छन् । घरमा श्रीमती आमा बुवा छोराछोरीको घर छिटै आइजाउँ भनेर गुनासो गरेपनि आफु दुखको झेलमा परेको गीत मार्फत पोखेका छन् ।
श्रीमती र घरका आमा बुवा छाराछोरी विचको मायाको वार्तालापलाई निकै मार्मिक रुपमा मिलन सिल्वालले शव्द सिर्जना मार्फत गरेको छ । ज्यादै मार्मिक गीतलाई चेतन गोतमेले लय सिर्जना गरेका छन् । भने परिकल्पना हिमाल सापकोटाले गरेका छन् ।
टंक केसीले छायाँकन गरेको भिडियोलाई विकास ज्ञवालीले सम्पादन गरेका छन् । प्रेम खड्का र मञ्जिता केसीको अभिनय रहेको सो मदन खड्काले निर्देशन गरेका छन् ।रोजगारीकै शिलसिलामा विगत १४ वर्षदेखि साउँदीमा रहेका गायक रोकाया पछिल्लो समयमा गीत संगित तिर लागेका छन् । कामकै सिलसिलामा साउँदी नै बसेर साँगितिक क्षेत्रमा लागेका हुन । रोकायाको जन्म स्थान गौमुल गाउँपालिका ४ हाल मुम्बई मै रोजगारीको सिलसिलामा बस्ने गर्दछन् ।
हेर्नुहाेस म्युजिक भिडियाे